न्यायालय बचाऊ - Prabhab Online
प्रकाशित मिति : ९ असार २०७९, बिहीबार ०८:३० 64 पटक हेरिएको
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा बेथिति र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध कानुन व्यवसायीले लामो समय आन्दोलन गरे । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले बेञ्च सेयर गरेनन् । न्यायालय विवादको भूमरीमा गिजोलियो । न्याय सम्पादनमा लामो समय अवरोध भयो ।
केही समय न्यायाधीशहरू इजालसमै बसेनन् । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको माग थियो– चोलेन्द्रको राजीनामा ।तर, उनले आफूविरुद्ध लामो समय आन्दोलन चल्दा पनि राजीनामा दिएनन् । बरु अदालत जाने, हाजिर गर्ने र फर्किने गर्न थाले ।
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच शीतयुद्ध नै चल्यो । पछि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि उनी निलम्बनमा छन् । महाभियोगको बाँकी प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीले कामयमुकामय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।यहीबेला सार्वजनिक भएको एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको ‘घुस डिल’को अडियो संवादले फेरि एकपटक न्यायक्षेत्र तरंगित बनेको छ । न्यायालयभित्रको बेथिति बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
ठगीको आरोपमा मुद्दा चलेका सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचको संवाद बाहिरिएको छ ।
यसस“गै न्यायालय तरंगित बनेको छ । यसभित्रको खेल सार्वजनिक भएको छ । न्यायालयभित्र कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने विषयलाई यो प्रकरणले उदांगो पारिदिएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, पेसी तोक्दादेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एक समितिले औंल्याइसकेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार हाल सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका सबै अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रचलन सुरु गरिएको छ । हालै सार्वजनिक भएको संवाद पनि गोलाप्रथा सुरु भइसकेपछिको रहेको उनीहरूको संवादबाट बुझ्न सकिन्छ ।
तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएर तामाङमाथि थुनछेक बहस हु“दै गर्दा दुवै पक्षबीच डिल भएको संवादबाट बुझ्न सकिन्छ । २०७८ पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । बाहिरिएको संवाद त्यही आसपासको हो ।
तामाङको पक्षमा वकालत गरेका पोखरेल त्यतिबेला नेपाल बार एसोसियसनका कोषाध्यक्ष थिए । उनले तामाङलाई धरौटीमा छाड्नका लागि निकै जोडबल गरेको देखिन्छ ।वास्तवमा सामान्य मानिसले अहिले मुद्दा लड्नै नसक्ने अवस्था छ । निकै खर्चिलो बनेको छ यो काम । पैसाको बलमा पीडकले पनि उन्मुक्ति पाउने गरेको भनेर बेलाबेला चर्चा र आलोचना भइरहन्छ । त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको संवादले ।
न्यायालय सुधारका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यसमध्येको प्रमुख काम भनेको यहाँभित्र हुने भ्रष्टाचार र चलखेलको अन्त्य नै हो । अदालत पुगेपछि न्याय पाइन्छ भन्ने पीडितलाई विश्वास जाग्नुपर्छ । त्यसका लागि न्यायालयबाट हुने न्याय सम्पादनले नै पुष्टि गर्ने हो । तर, यो विश्वासको वातावरण आमजनमा धर्मराउँदै गएको छ । न्यायालयको नेतृत्वले बेलैमा यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । न्यायालय जोगाउने प्रमुख दायित्व न्यायपालिकाकै हो । त्यसकारण यसमा गम्भीर बनौं । न्यायपालिकाको विश्वास बचाइराखौं ।
फुकेन निजगढको गाँठो
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’लाई
सम्भावित संकट रोक
असल अभ्यासको थालनी
साइबर अपराधबाट जोगिऔं
मावन–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाऊ
देशलाई ‘अहित’ हुने एसपिपी
असंलग्न नीतिलाई नबिर्स
भारत सरकारले पेट्रोल, डिजेलमा निर्यात कर लगायो
स्पोर्ट्स हव ओपन ब्याडमिन्टन अर्काे महिना
बैंकिङ कसूरका फरार दुई जना प्रतिवादी पक्राऊ
कोरोना संक्रमितको वृद्धि
हिमालयन हाइड्रोपावरको सेयरमा करिब १० लाखको आवेदन
अध्यक्ष : कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक : दीपा सुनुवार
बजार प्रमुख : सन्तोषराज खरेल
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. : ३२५१-२०७८/७९
प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं. : ३२३६
विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क:
कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
© 2022 prabhabonline.com All rights reserved.